Khilaafka Galmudug oo sii xoogeystay | KEYDMEDIA ONLINE
Khilaafka taagan waxuu ka dhashay dhismaha Gollaha degaanka Balanballe, oo Wasiirka Arrimaha Gudaha Cabdi Waayeel xilkiisa ku waayay.
DHUUSAMAREEB, Soomaaliya - Wasaaradda Arrimaha Gudaha Galmudug ayaa soo saartey qoraal ay ku shaacisay in lagu kala diray Gudigii Farsamadda ee Dhismaha Gollayaasha degaanka.
Tallaabadan ayaa imaanaysa maalmo kadib markii Madaxweyne ku xigeenka uu xilkii ka qaadey Wasiirka Arrimaha Gudaha Cabdi Waayeel, oo lagu eedeeyay howl-gudasho la'aan, isagoo xiisad ka dhex abuuray beelaha degan Balanballe.
Hanaanka dhismaha Gollayaasha ayuu ka jiraa khilaafka ugu weyn, waxaana hadda la kala diray gudigii howsha qaabilsanaa, iyadoo wasiirkana shaqada laga eryay, taasoo banaanka soo dhigtay khilaafka siyaasadeed ee ka jira Galmudug.
Qoraalka kasoo baxay Wasaaradda Arrimaa Gudaha ayaa u qornaa sida soo socota:
Madaxweyne Qoor-Qoor ayaa ka maqan Galmudug mudo dheer, isagoo gabey waajibaadkiisa shaqo ee u dhaartay kaasoo ah u adeegidda Galmudug, isagoo ku fashilmay balan-qaadkiisii doorashadda inuusan noqon doonin hogaamiye dibad-joog ah.